धेरै दलितले आफ्नो थर र गोत्र नै बिर्सिसके | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
धेरै दलितले आफ्नो थर र गोत्र नै बिर्सिसके
जेठ २१, २०७६ मंगलबार १७:१८:५५ | आहुति
शहरमा अझै पनि कोठा खोज्दा दलित जातिकाले सजिलै पाउन नसक्ने अवस्था छ । यो छुवाछुत नभएर के हो त ?
इतिहासमै जम्मा दुईजना सीडीओ तथा दुईजना एसपी बनेका छन् । ६ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २३ प्रतिशत दलित छन् । तर प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा एक जना पनि छैनन् । त्यो विभेद नभएर के हो त ? शहरमा अझै पनि कोठा खोज्दा दलित जातिकाले सजिलै पाउन नसक्ने अवस्था छ । यो छुवाछुत नभएर के हो त ?
यो व्यवस्थाले कसरी दलित जातिको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन वा हुन दिँदैन भन्नेबारे भारतको उदाहरणलाई हेराैँ -
यसको मतलब हो १८ करोडको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । उनीहरु अर्थात समग्रमा ९० प्रतिशत दलित समाजको पिँधमै छन् । पौने एक सय वर्षको अभ्यासमा पनि ९० प्रतिशत दलित उत्पीडित, भूदासको अवस्था उस्ताको उस्तै छ अर्थात उनीहरु समाजको पुछारको पुछारमै छन् । भनेपछि यसले के गर्छ भन्ने त प्रष्टै भएन र ? अब २५–३० वर्षमा के के नै होला भन्ने त हुँदैन ।
नेपालमा पनि लगभग ७० वर्षअघि भारतमा लागू भएको जस्तै नयाँ सँविधान लागू भएको छ । संघीयता लागू भएको छ । तर यो भारतको जति समृद्ध पनि देखिँदैन । जबकी भारतकै संघीयतालाई आधा संघीयता भनिन्थ्यो भने हाम्रोलाई कति भन्ने ? यो बहसको अर्को विषय हो ।
अब मानौँ कुनै दलित व्यक्ति पूँजीपति बन्नका लागि कुनै उद्यम गर्छु भनेर ऋण लिन बैँकमा गयो । उसलाई धितो चाहिन्छ । त्यो पनि मापदण्डसहितको । १ करोड ऋण लिन्छु भन्ने हो भने कम्तीमा साढे २ करोड रुपैया (बैँकले गरेको मूल्याङ्कनको) मूल्यको जग्गा चाहियो । उसले कहाँबाट ल्याउने ? केही हजार वा एक दुई लाख पैसा आए पनि त्यसले उसलाई उद्यमी बनाउन वा उसको अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने ल्याकत राख्दैन । त्यसले बिहान बेलुकाको गर्जो टार्न सघाउने मात्र हो । यसले ऊ पूँजीपति बन्नै सक्दैन ।
पूँजीको अर्को श्रोत भनेको जग्गाजमिन हो । जग्गा बेचेर पूँजी बटुल्छु र लगानी गर्छु भन्ने हो भने पनि दलितहरुसँग जमिन छैन । इतिहासमा शासकले राख्नै दिएनन् । कहाँबाट ल्याउने जमिन र बेच्ने ? उनीहरु त कमाराकमारी न थिए । अनेक दु:ख गरेर केहीले जोडेको जमिनले धेरै पैसा आउँदैन वा उनीहरुलाई खानै ठिक्क हुने गरी उत्पादन मात्र हुन्छ ।
त्यसैले, अहिलेको पाराले यही शासन व्यवस्थाले देशका दलितहरुको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउने छाँटकाँट देखिँदैन । शासकले पनि चाहेका छैनन् । कि त सिधै सबै श्रमिक पूँजीपतिमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था बनाउनुपर्‍यो । त्यस्तो गर्न पनि शासकले चाहँदैनन् । भनेपछि हाम्रो जस्तो पूँजीवादमा कसरी फेरिन्छ त दलितको अवस्था ? प्रश्न गम्भीर छ ।
-राजनीतिक र सामाजिक अध्येता आहुतिसँग लक्ष्मण कार्कीले गरेकाे कुराकानीमा आधारित
- आहुति राजनीतिक तथा सामाजिक अध्येता हुनुहुन्छ ।
BP Lohani Panchal
June 10, 2019, 12:48 p.m.
विश्वकर्माले महापुराण पनि अध्ययन गर्नुपर्यो लेख /